Igalelo likaSteve Jobs kwiiRadiyo zenethiwekhi- iiRadiyo zenethiwekhi
Ikhaya / Akohlulwanga / Igalelo likaSteve Jobs kwiiRadiyo zenethiwekhi
ezaposwa ngomhla Agasti 29, 2018
Tshotsho! Ndacinga ukuba isihloko sinokutsala umdla wakho!
Buyela kwikamva- isitayile sika-2007
Buyela ezingqondweni zakho, ukuba uyathanda, ekusungulweni kwe-iPhone yokuqala ngo-2007. Usenokubukela oku kuYouTube.
Inkosi yenkcazo eyayingasekhoyo uSteve Jobs ekuqaleni wazisa ngesixhobo sokuguqula ngokwenene ngokuzama ukukhohlisa abaphulaphuli bakhe.
Wazama ukubacenga ukuba bakholelwe ukuba i-Apple yayisungula ezintathu hlukile Zixhobo.
Wayemana ephinda phinda-phinda- "i-iPod, ifowuni, isixhobo soNxibelelwano nge-Intanethi- i-iPod, ifowuni, isixhobo soNxibelelwano nge-Intanethi".
Ekugqibeleni abaphulaphuli bafaka umqhaphu kwinto yokuba wayedlala nabo, ebhekisa kubo isixhobo esinye kuba zonke oku kusetyenziswa.
Iitekhnoloji zeTekhnoloji ziyibiza ngokuba "kukuhlangana" kwaye i-iPhone ngokuqinisekileyo iyimpawu yazo zonke izixhobo ezihlanganisiweyo.
Ukudibana kulapha ukuze uhlale!
Kwaye silapha sineminyaka eli-11 kwaye ukudibana kulungile kwaye kuyinyani apha!
Akukho TV ifunekayo-isixhobo esiphathwayo esenzelwe oko
Akukho sixhobo somdlalo siyimfuneko-isixhobo eselfowuni sokwenza oko
Ngaba uqhuba ishishini lakho?
Akukho PC ifunwayo-isixhobo esiphathwayo esenzelwe oko
Akukho unomathotholo ofunekayo-isixhobo esiphathwayo esenzelwe oko
Ukunxibelelana nabahlobo bakho?
Akukho myalezo ubhaliweyo-Imidiya yokuncokola ekwisixhobo esiphathwayo soko
Akukho PC ifunekayo-ukusasaza kwisixhobo esiphathwayo soko.
Ukuthatha ifoto esemgangathweni?
Akukho khamera ifunekayo-isixhobo esiphathwayo esenzelwe oko
Akukho sidingo sokuyilindela kwiTV-kukho usetyenziso kwisixhobo esiphathwayo esenzelwe oko
Kwizandla zakho ezivela kwimithombo eyahlukeneyo kwisixhobo esiphathwayo, ewe!
Izilumkiso kwangoko ngeenjongo zamva kwiqela lakho?
Iyadanyaza kwisixhobo sakho esiphathwayo kwimizuzwana nje yokufumana amanqaku
Ndingaqhubeka kwaye uyazi konke oku kungentla ukuba kuyinyani kumava akho.
Kwaye iRadio ikhululwe koku? Mhlawumbi akunjalo!
Ngaba ukhona umntu owakholelwa ngokwenyani ukuba unxibelelwano lwe-PTT lohlobo olusetyenziswa ngoonomathotholo luzakuhlala phandle Yehlabathi elihlangeneyo?
Ukunyuka kweeapps ezinje ngeZello kunye ne-IRN kwiTeamspeak yinto yendalo yonke yendalo ebisenzeka kwilizwe liphela iminyaka emininzi. Abo bathanda ukudlala iiradio banokulwa nayo, kodwa inyani sele yenzekile…
Ukunyuka kweeRadiyo zeNethiwekhi
Ukunyuka kwesimo seNethiwekhi yeeRadiyo okwangoku kubonakala ngathi akunakuthintelwa.
Isuti yeeChannel kwiZello ebizwa ngokuba yi "Network Radios" (ezabanini beG1YPQ) inababhalisi abangaphezulu kwe-4000, ngaphezulu kwabasebenzisi be-2000 abathembekileyo kwaye kunqabile ukuba bathule.
Iyaxokozela phantse yonke imini nabantu abathanda unomathotholo, hams kunye nabasebenzisi abangenaphepha-mvume, abavela kwihlabathi elithetha isiNgesi, bonke benxibelelana ngeendlela ezikhumbuza imihla yakudala yeTop Band kunye neemitha ezi-2.
Yindawo efanelekileyo yokumodareyitha nayo, ikhuselekile ke kwaye yindawo entle yokuthatha amanyathelo akho okuqala kukuzonwabisa.
Okanye mhlawumbi indawo apho "ungahlafuna amanqatha" nabanye abantu abanomdla wonomathotholo, indawo oza kuyithetha malunga nenkqubela phambili yokufunda i-CW okanye iingxaki ozibethayo ngokwenza i-eriyali entsha, okanye mhlawumbi ufumane indlela ejikeleze i-Android OS kunye nezinye yezinto ezifihliweyo kwisoftware yeZello.
Ukuba awukazami okwangoku, ulinde ntoni?
Ukuba uSteve Jobs ebesesemhlabeni, ndiqinisekile ukuba ebeya kuba neqhayiya "ngehlabathi lakhe elihlangeneyo" - kwaye ngubani owaziyo, ngesele "esemoyeni" kwiiRadiyo zeNethiwekhi kunye nathi sonke!
© UChris Rolinson G7DDN
27 Agasti 2018